Kulanka Jimcaha Al-Saadicuun Bil-Xaq
Kulanka Jimcaha 02 April 2017
KULANKA JIMCAHA 1AAD
kulankan 1-aad waxaa looga jawaabayaa su`aasha ah " ma kaligiin baa muslimiin ah ? "....
KULANKA JIMCAHA 2AAD
kulankan 2-aad waxaa looga jawaabayaa su`aasha ah " maxaa Waqtigaan Kusoo beegay Dacwaddiina ? Maxaadse Mar hore Dadka dacwada ugu yeeri-weyseen ?"....
KULANKA JIMCAHA 3AAD
kulankan 3-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: “Maxaad muddadaas dheer u qarsoonaydeen?”...
KULANKA JIMCAHA 4AAD
kulankan 4-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "Maxaa cusub oo aad soo kordhiseen?"...
KULANKA JIMCAHA 5AAD
kulankan 5-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: " Maxaad dacwadiina uga dhigteen baaq ku socdo caalamkoo idil? Soo arrintaasu keensan mayso inay dacwadiinu tahay mid dagaal ku qaadayso caalamkoo dhan?...
KULANKA JIMCAHA 6AAD
kulankan 6-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "Hadii Dacwadiina la idinka aqbali waayo maxaad samaynaysaan?"...
KULANKA JIMCAHA 7AAD
kulankan 7-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "Maxaad xoogga u saarteen qadiyadda xukunka (الحاكمية) ?"...
KULANKA JIMCAHA 8AAD
kulankan 8-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "sidee buu qur'aanku uga hadlay xukunka?"...
KULANKA JIMCAHA 9AAD
kulankan 9-aad waxaa looga hadlayaa khatarta ay leedahay qadiyadda xukunka. Waxaa la caddaynayaa in dadku ay raacaan laba hab-nololeed mid uun; kii Allaah soo dajiyay ama mid hawadooda ku dhisan....
KULANKA JIMCAHA 10AAD
kulankan 10-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "ujeeddadiinna ma inaad xisbi siyaasadeed noqotaan baa?"...
Kulanka Jimcaha 24 October 2020
KULANKA JIMCAHA 11AAD
kulankan 11-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: " Xaggee bay jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq dhaqaalaha ka heshaa? yaase ka taageera Dhinaca Dhaqaalaha ?"...
KULANKA JIMCAHA 12AAD
kulankan 12-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "Maxaa loo waayay culumo waawayn oo idin taageerta?"...
KULANKA JIMCAHA 13AAD
kulankan 13-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "Maxaad Dadka iskaga soocdeen , maxaad Jameeco u sameyseen ood magac gaar ah ula baxdeen ?"...
KULANKA JIMCAHA 14AAD
kulankan 14-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "MAXAAD DADKA KA AAMINSANTIHIIN?"....
KULANKA JIMCAHA 15AAD
kulankan 15-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "Muxuu yahay MANHAJKA Dacwada Dariiqa Loo Marayo, ma jiraa Dariiq Allaah Jideeyay oo Khasab tahay in La raaco ?"....
KULANKA JIMCAHA 16AAD
kulankan 16-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: " Maxay yihiin astaamaha u gaarka ah manhajka dacwada ee nabiyada Allaah soo diray Mareen dhammaantood ?"....
KULANKA JIMCAHA 17AAD
kulankan 17-aad Waxaa lagu qaadaa-dhigayaa heerarka uu marayo manhajka islaamka. Waa heerar ama marxalado isku xig-xiga, waxayna ku caddahay siirada nabiga SCW....
KULANKA JIMCAHA 18AAD
kulankan 18-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: "maxay tahay maslaxada dacwada? Yaase Garanaya oo Go’aamminaya meesha u roon Dacwada iyo Diinta intaba ?"....
KULANKA JIMCAHA 19AAD
kulankan 19-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: " Maxay yihiin astaamaha lagu garto in manhajkii Allaah laga weecday, iyo dhibaatooyinka ka iman kara weecashadaas ?"...
KULANKA JIMCAHA 20AAD
kulankan 20-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ah: " waa idinka Allaah hala caabudo yiriye, cibaado maxaad ka waddaan? Dadkuse miyaysan Allaah caabudin haddaba ?" ....
KULANKA JIMCAHA 21AAD
kulankan 21-aad waxaa looga hadlayaa xiriirka cibaadadu ay la leedahay nolosha dadka oo idil. Waxaa la caddaynayaa in cibaadada la isu abuuray ay tahay in nolosha dhinac walba Allaah loo ...
KULANKA JIMCAHA 22AAD
kulankan 22-aad waxaa looga jawaabayaa su’aasha ‘ Daaghuut maxaa loola jeedaa? Daaghuut iyo laa ilaaha illalaah maxaa isaga xiran? Waa maxay Daaghuut ha lagu kufriyo? Culimadu waxay sheegeen inuu quraanku ...
KULANKA JIMCAHA 23AAD
kulankan 23-aad waxaa lagu falanqaynayaa macnaha ay leeyihiin ereyada Al-Walaa' iyo Al-Baraa'; iyo xiriirka ay la leeyihiin caqiidada islaamka. Dadka islaamka waa inay dhexdooda gacaltooyo iyo is-garabsi uu ka dhexeeyo, ...
KULANKA JIMCAHA 24AAD
kulankan 24-aad wuxuu kulankan dabayaal kulankii u dambeeyay, waxaa lasii faahfaahinayaa qaabkii ay nabiyadii iyo dadkii raacay u fahmeen qadiyadda Walaa iyo Baraa'. Waxaa la caddaynayaa in nabiyada qaar xaasaskoodii, ...
KULANKA JIMCAHA 25AAD
kulankan 25-aad waxaa looga jawaabayaa Su'aasha ah: "dadku diinta ay haystaan iyo diinta aad ugu yeeraysaan maxay kala yihiin?" Waxaa si baaxad leh loo qeexayaa ereyga DIIN macnaha uu ku ...
KULANKA JIMCAHA 26AAD
kulankan 26-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: "qur'aanku sidee buu u adeegsaday ereyga DIIN?" Waxaa lagu lafa-gurayaa 4tii macne ee kulankii hore looga soo hadlay qaababkii ay qur'aanka ugu soo ...
KULANKA JIMCAHA 27AAD
KULANKA JIMCAHA 28AAD
kulankan 28-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: (maxay tahay Jaahiliyo?). Jaahiliyo waxay ka mid tahay ereyada fahamkoodu uu wareerka ka jiro, oo dadka maanta ay khalad ka fahmeen. Qur'aanku afar ...
KULANKA JIMCAHA 29AAD
kulankan 29-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah (maanta dunida jaahiliyo maka jirtaa? Sideebayse jaahiliyo ku noqotay?) Ka dib markii kulankii u dambeeyay laga hadlay astaamaha afarta ah ee jaahiliyo lagu ...
Kulanka Jimcaha 10 January 2019
KULANKA JIMCAHA 30AAD
kulankan 30-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: "Shirki muxuu yahay? Khatartiisuna maxay tahay?". Waxaa lagu soo bandhigayaa kulankan macnaha uu leeyahay ereyga shirkiga, luqad ahaan iyo sharci ahaan labadaba. Waxaa ...
Kulanka Jimcaha 11 January 2019
KULANKA JIMCAHA 31AAD
kulankan 30-aad waxaa looga jawaabayaa Su'aasha ah: Qaybaha shirkiga maxay yihiin? Qaababkee buuse ku yimaadaa? Waxaa kulankan lagu lafa gurayaa noocyada shirkigu leeyahay, sida ay culumada islaamka u qaybiyeen. Waxaa ...
KULANKA JIMCAHA 32AAD
kulankan 31-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: Maxaa caddaynaya shirkigii laga soo hadlay inuu maanta ka dhex jiro bulshadeenna? Waxay culimadu caddaynayaan inay saddexdii nooc ee shirkul akbar dhammaan si ...
KULANKA JIMCAHA 33AAD
kulankan 33-aad waxaa looga jawaabayaa Su'aasha ah: (Maxaa keenay shirkigaas iyada oo lagu jiro, inay dadku isu haystaan muslimiin?) Waxaa horay loo caddeeyay dadku in badan in ay shirki ku ...
KULANKA JIMCAHA 34AAD
kulankan 34-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: (Islaamku qurbo miyuu ku jiraa? Sidee buu qurbo ugu jiraa isagoo meel walba lagu sheegayo?). Waxaa la caddeeyay in islaamku qurbo uu ku ...
KULANKA JIMCAHA 35AAD
kulankan 35-aad Waxaa looga hadlaya Su’aasha ah: Islaamka maqan muxuu yahay? sideese Qurbada looga bixin karaa islaamka? Waxay Culumadu cadeeyeen in islaamka qaabkiisa ay xaddidi karaan Allaah iyo rasuulkiisa oo ...
KULANKA JIMCAHA 36AAD
kulanka 36-aad waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: Islaamka qurbada ku timid taariikhda ma dhici jirtay? sidee bay u dhici jirtay? Waxaa lagu falanqaynayaa xaqiiqada islaamka dadka loogu yeerayo, sidii ay ...
KULANKA JIMCAHA 37AAD
kulankan 37-aad Waxaa looga jawaabayaa su'aasha ah: "sidee islaamka uga bixinnaa qariibnimada uu ku jiro? Sidee ugu guurnaa islaamka saxda ah?". waxaa kulankan lagu caddaynayaa in mar haddii dadku aysan ...
Kulanka Jimcaha 15 January 2019
KULANKA JIMCAHA 38AAD
kulankan 38-aad waxaa lagu lafa gurayaa "xaqiiqada risaalada islaamka ee la rabo in loo guuro" iyo sida waaqaca maanta jira uu xaqiiqadaas uga fog yahay. Waxaa la isu barbardhigayaa muslimiinta ...
KULANKA JIMCAHA 39AAD
kulankan 39-aad waxaan looga hadlayaa qadiyadda ah: (Maxay tahay ujeeddada Qur’aanka? Muxuu yahay dowrkiisa?). Waxay culimadu ka hadleen qur'aanka mawduuciisa oo ah towxiidka, iyo sidii nolosha oo idil Allaah loogu ...
KULANKA JIMCAHA 40AAD
kulankan 40-aad waxaa kulankan looga hadlayaa (Nuxurka risaalada Qur'aanka). Waxaa la caddaynayaa in Qur'aanka nuxurkiisa uu yahay hanuun, iftiin, fadli xag Allaah ka yimid, iyo hab nololeed dhamaystiran. Waxaa aad ...
KULANKA JIMCAHA 41AAD
KULANKA JIMCAHA 42AAD
Kulanka Jimcaha 19 January 2019
KULANKA JIMCAHA 43AAD
Kulanka Jimcaha 26 January 2019
KULANKA JIMCAHA 44AAD
Mawduuca kulanka xalaqadan waa: (ilaahnimada Allaah iyo saamaynta ay kownka iyo nolosheenna ku leedahay, iyo shucuurka ka dhalanaya arrintaas!) Waxaa halkii laga sii wadayaa Allaah oo iskaaya baraya. Kulankaan waxaa ...
Kulanka Jimcaha 15 November 2019
KULANKA JIMCAHA 45AAD
Mawduuca kulankaan waxaa weeye: (nolosha insaanka ee kownkan wayn iyo saamaynta ay ku leedahay ilaahnimada Allaah). Waxaa kulankan lagu faahfaahinayaa sida uu Allaah insaanka ugu sakhiray kownka iyo wax walboo ...
Kulanka Jimcaha 21 November 2019
KULANKA JIMCAHA 46AAD
Mawduuca kulanka: rizqiga uu Allaah na siiyay iyo qaababkiisa kala duwan muxuu Qur’aanku ka yiri? Waxaa kulankan diiradda lagu saarayaa macnaha rizqiga, inuu Allaah SWT wax walba arzaaqayo, baaxadda ay ...
Kulanka Jimcaha 22 November 2019
KULANKA JIMCAHA 47AAD
Mawduuca kulanka: arsaaqo raadis awgeed malagu caasin karaa Allaah? Shirki maloogu dhici karaa? Waxaa kulankan lagu sharxayaa risiqa Allaah inuu gacanta ku hayo, cid kale oo wax arsaaqi kartana aysan ...
KULANKA JIMCAHA 48AAD
Mawduuca kulanka: Allaah SWT sida uu kownka u maamulo ayuu nolosha insaankana u maamulaa Waxaa is waydiin mudan awoodda bina'aadanku intee bay la egtahay? Kownka iyo nolosha dadka yaa maamula? ...
KULANKA JIMCAHA 49AAD
Mawduuca kulanka: isbaddalka ummadaha ku dhaca iyo sida uu Allaah u maamulayo Ummad waliba heerar bay martaa, awood bay ku billaabataa, ugu dambaynna waa laga itaal roonaadaa; waa sunnada Allaah ...
KULANKA JIMCAHA 50AAD
Mawduuca kulanka: maamulka Allaah SWT ee kownka iyo nolosha dhinacyadeeda kala duwan, iyo tusaalayaasha uu Qur’aanku ka bixiyay arrintaas Ma shaki baa ku jira in Allaah SWT uu nolosheenna toos ...
KULANKA JIMCAHA 51AAD
Mawduuca kulanka: Cilmiga ballaaran ee Allaah SWT ee wax walba koobay Qur'aanku wuxuu na barayaa sifooyinka Allaah si aan rabbigeenna u baranno. Cilmiga Allaah aad buu u baaxad waynyahay, wax ...
KULANKA JIMCAHA 52AAD
Mawduuca kulanka: Allaah SWT nolosha qof walba oo naga mid ah wuu daalacanayaa Allaah waa cilmi badane wax walba og, siyaabo kala duwan buuna Qur'aanku uga hadlay sida uu Allaah ...
KULANKA JIMCAHA 53AAD
Mawduuca kulanka: Abuurista Allaah SWT ee kownka iyo dadka; iyo sida ay ugu xirantahay maamulkiisa Waxaad kulankaan ka daawan doontaan abuurista Allaah, nimcooyinka uu na siiyay iyo maamulkiisa kownka oo ...
KULANKA JIMCAHA 54AAD
Mawduuca kulanka: Allaah ayaa addoomadiisa maamulaya oo muquuninaya, iyaguna waa inay Allaah ka baqaan Waxaa la is dul taagayaa maamulka Allaah ee sida muuqata nolosha bina'aadanka sida uu doono u ...
KULANKA JIMCAHA 55AAD
Mawduuca kulanka: Dhimasha ka dib iyo maalinta aakhiro ayay dad badan ogaan doonaan in maamulka uu Allaah kaligii leeyahay Waxaa kulankan looga hadlayaa sida uu Allaah noo barayo in xisaab ...
KULANKA JIMCAHA 56AAD
Mawduuca kulanka: Fartoomidda iyo raacitaanka waxa uu Qur’aanku inoola yimid Waxaa kulankaan looga hadlayaa inuu Allihii na abuuray oo danteenna garanayay uu noo soo dajiyay kitaabka Qur'aanka, inaan qaadanno maahane ...
KULANKA JIMCAHA 57AAD
Mawduuca kulanka: Abaal marinta maalinta Aakharo iyo sida ay dadku u kala baxayaan Waxaa kulankaan looga hadlayaa aakharo waxa lagu badbaadayo oo ah towxiid iyo shirki la'aan. Waxaa aad xoogga ...
KULANKA JIMCAHA 58AAD
Mawduuca Kulanka: Ka digidda maalinta dhaw ee Qiyaamaha (Aakharo) Waxaa kulankaan la sii wadayaa aayadihii qur'aanka ahaa, ee soo bandhigayay maalinta Aakharo iyo sida ay towxiidka iyo waynanka Allaah ugu ...
KULANKA JIMCAHA 59AAD
Waxaa Kulankaan lagu falanqaynayaa xaqiiqada ah in dadka manta dunida ku nool ay ka fogaadeen ku dhaqanka diinta islaamka. Oo diintii allaah dhabarka u jeediyeen ayagoo u sii jeestay aduunyo, ...
KULANKA JIMCAHA 60AAD
Waxaa Kulankaan looga hadlayaa xaaladda ay ku sugantahay umadda maanta iyo sidii loo soo celin lahaa jiritaanka Ummad muslim ah Iyo Sidee ayay ku suurta gali kartaa inay umadda maanta ...
KULANKA JIMCAHA 61AAD
Waxaa Kulankaan lagu falanqaynayaa xaqiiqada Adoon u noqoshada Allaah . "حقيقة العبودية لله تعالى". Waxaa looga Jawaabayaa Su'aalaha kala ah : 1. Waa maxay Cibaadada Allaah ee shirkiga looga badbaadayo? ...
KULANKA JIMCAHA 62AAD
Waxaa Kulankaan lagu falanqaynayaa xaqiiqada ah in ay jiraan maanta wax badan oo ay dadku ilaahyo ka dhigtaan oon Allaah Ahayn. "حقيقة آلهة العصر". Waxaa looga Jawaabayaa Su'aalaha kala ah ...
KULANKA JIMCAHA 63AAD
Waxaa Kulankaan lagu falanqaynayaa xaqiiqada ah in ay jiraan maanta wax badan oo ay dadku ilaahyo ka dhigtaan oon Allaah Ahayn. "حقيقة آلهة العصر". Waxaa si gaar ah loogu sharxayaa ...
KULANKA JIMCAHA 64AAD
Waxaa Kulankaan lagu falanqaynayaa xaqiiqada ah in ay jiraan maanta wax badan oo ay dadku ilaahyo ka dhigtaan oon Allaah Ahayn. "حقيقة آلهة العصر". Waxaa Xalaqadaan si gaar ah lagu ...
KULANKA JIMCAHA 65AAD
KULANKA JIMCAHA 66AAD
KULANKA JIMCAHA 67AAD
KULANKA JIMCAHA 68AAD
KULANKA JIMCAHA 69AAD
KULANKA JIMCAHA 70AAD
KULANKA JIMCAHA 71AAD
Waxaa Kulankaan lagu falanqaynayaa xaqiiqada ah in ay jiraan maanta wax badan oo ay dadku ilaahyo ka dhigtaan oon Allaah Ahayn. "حقيقة آلهة العصر". Xalaqadaan waxaa looga hadli doonaa wixii ...
KULANKA JIMCAHA 72AAD
Waxaa Kulankaan si gaar ah lagu falanqaynayaa Dastuurrada, Shuruucda iyo Xuquuqda Sharci Dejinta-"الدساتير و القوانين الوضعية وحق التشريع" Faahfaahinta arrintaas waxaad kaga bogan doontaan kulanka....
Kulanka Jimcaha 28 November 2019
KULANKA JIMCAHA 73AAD
Waxaa Kulankaan si gaar ah loogu falanqaynayaa su'aasha ah goormey dadku khiyaar u yeesheen kala doorashada ma Allaah baan caabudnaa (shareecadiisa ku dhaqannaa) mise cid kale ayaan caabudnaa (dastuurka iyo ...
Kulanka Jimcaha 05 December 2019
KULANKA JIMCAHA 74AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa marin habaabinta aadanaha lagu hayo si looga leexiyo isu dhiibida Allaah oo shareecadiisa loo hoggaansamo marmarsiinyana loogu helo ku dhaqanka dastuur ay dad ...
Kulanka Jimcaha 12 December 2019
KULANKA JIMCAHA 75AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah talada aduunyada iyo nolosha aadanaha yaa iska leh ma Allah baa leh mise hawo baniaadam ama ilaahyo dadku ay samaysteen? Faahfaahinta ...
Kulanka Jimcaha 19 December 2019
KULANKA JIMCAHA 76AAD
Waxay ummaddeennu ku nooshahay xaalad murugo leh kaddib markay aad uga fogaadeen kitaabka Allaah iyo shareecada Islaamka, waa waaqac xanuun badan una baahan isbeddel mug leh, dad baa markay saa ...
Kulanka Jimcaha 26 December 2019
KULANKA JIMCAHA 77AAD
Waxaa jira xeerar, caadooyin iyo dhaqamo ay daku samaysteen kuwaas oo wax xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya, xuquuq iyo waajibaadna cadeeya. Waxaa xeerarkaasi asalkooda laga keenay oday dhaqameedyada ay qabaa’ishu leeyihiin, kuwaas ...
Kulanka Jimcaha 02 January 2020
KULANKA JIMCAHA 78AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah halkee laga soo xigaty xeerar dhaqameedyada ay qabaa’ishu leeyihiin? Waa maxay mowqifka uu islaamku ka taagan yahay? Jawaabaha su’aalahaasi waxaad kaga ...
Kulanka Jimcaha 09 January 2020
KULANKA JIMCAHA 79AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aalaha ay ka mid yihiin: 1- Qabiilku muxuu yahay? 2- Islaamku muxuu qabiilka u yaqaanaa? 3- Maxay tahay qabyaaladdu?....
Kulanka Jimcaha 16 January 2020
KULANKA JIMCAHA 80AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah: Maxaa sababay in ay qabyaaladdu u horseedo bulshadeena dhibaatooyin fara badan (oo aan maanta wada dareemi karno saamayntooda) iyo in ay ...
Kulanka Jimcaha 22 January 2020
KULANKA JIMCAHA 81AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa astaamaha ay leedahay nolosha Jaahiliga ah ee casrigaan jirta. Faahfaahinta arrintaas waxaad kaga bogan doontaan kulanka....
Kulanka Jimcaha 29 January 2020
KULANKA JIMCAHA 82AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah: Maxay tahay xaqiiqada jaahiliyada casrigaan jirta? Intee ayey sii jiri kartaa jaahiliyadaasi ayada oo ku dhisan baadil iyo ka leexasho nidaamka ...
Kulanka Jimcaha 05 February 2020
KULANKA JIMCAHA 83AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa nolosha Islaamka iyo sida uu Islaamku dadka uga samata-bixiyo nolosha mugdiga ah ay ku noolyihiin kadib markii ay ka fogaadeen nidaamka Allah. Faahfaahinta ...
Kulanka Jimcaha 12 February 2020
KULANKA JIMCAHA 84AAD
Waxaa jirta waayahaan dambe, kadib markii ay dunidu gacanta u gashay xadaarad indha la' oo maadi ah in ay dadkii noqdaan kuwo cizeeya maalka iyo muunada, wixii maadada kasoo harayna ...
Kulanka Jimcaha 19 February 2020
KULANKA JIMCAHA 85AAD
Waxaa jira ololayaal u taagan in aysan dadku ka bixin baadida ay ku sugan yihiin, kuwaas oo aanan ogolayn in dadkii loo tilmaamo wada toosan si ay aduunyo iyo aakhiro ...
Kulanka Jimcaha 26 February 2020
KULANKA JIMCAHA 86AAD
Ducaadda waxaa laga doonayaa in ay xaqqa dadka u gaarsiiyaan sida uu yahay, waaqicooda saxda ahna ay u tilmaamaan. Dhanka kale, dadka waxaa laga doonayaa in ay noloshooda ku hergaliyaan ...
Kulanka Jimcaha 04 March 2020
KULANKA JIMCAHA 87AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa: Geediga fog oo la doonayo in looga guuro nolosha Jaahilga ah, looguna guuro nolosha Islaamka oo ku dhisan in Allah loo hogaansamo. Faahfaahinta ...
Kulanka Jimcaha 11 March 2020
KULANKA JIMCAHA 88AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah: Maxaa dadka maanta ka hor taagan in ay ajiibaan xaqa? Faahfaahinta arrintaasi waxaad kaga bogan doontaan kulanka....
Kulanka Jimcaha 18 March 2020
KULANKA JIMCAHA 89AAD
Maanta dunidii waxaa haysta jaahiliya maadi ah oo noloshii qiima-tirtay. Dhanka kale, bulshooyinka ku nool dhulka loo yaqaano dunida muslimka oo ay ahayd in ay u istaagaan badbaadinta aadanaha waxay ...
Kulanka Jimcaha 25 March 2020
KULANKA JIMCAHA 90AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah: Intee ayuu le egyahay wareerka iyo walaahowga haysta bulshooyinka ku nool dhulka loo yaqaano dunida muslimka? Faahfaahinta arrintaas waxaad kaga bogan ...
Kulanka Jimcaha 01 April 2020
KULANKA JIMCAHA 91AAD
Waxaa kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa su'aasha ah: Sidee looga bixi karaa wareerka iyo walaahowga haysta bulshooyinka ku nool dhulka loo yaqaano dunida muslimka? Faahfaahinta arrintaas waxaad kaga bogan ...
Kulanka Jimcaha 09 April 2020
KULANKA JIMCAHA 92AAD
Waxaan kulankaan ugu talagalnay in aan dib u milicsano oo aan is xasuusino xaqaa'iqdii aan ku soo bayaaminay baraamijtii iyo duruustii aan wadnay. Faahfaahinta arrimahaas waxaad kaga bogan doontaan kulanka....
Kulanka Jimcaha 16 April 2020
KULANKA JIMCAHA 93AAD
Waxaa Kulankaan si gaar ah loogu falanqeynayaa: Muhiimadda uu leeyahay barnaamijka Kulanka Jimcaha iyo ahdaafta uu gudanaayo. Faahfaahinta arrimahaas waxaad kaga bogan doontaan kulanka....